Mgbapụta Centrifugal, Nfuli Ọrụ, Mpepụta Silicon Carbide - Yiyan
Desulfurization absorption ụlọ elu
Ọhụụ abalị nke ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ
Mgbapu mmiri mikpuru
Ngwunye abrasion siri ike
Mgbapụta mmiri 40YPV
Mgbapụta Mmiri 65YQV
Mgbapụta Mmiri 100YRV
Mgbapụta Mmiri 150YSV
Ngwaahịa pụrụ iche
Nnukwu mgbapụta 80ZGB
Nnukwu mgbapụta 100ZGB
Ngwunye abrasion siri ike 100DXD
Ngwunye abrasion siri ike 200STXD
Ngwunye abrasion siri ike 300STXD
24-e. 2015 г. 12:50:27 0 Comments Admin Admin
Stratege strategie oriri, nka to Sai ...
Ka ọnwa nke asatọ dị na mkpụrụ ụbọchị iri atọ na otu, “2020 Expo World Expo Protection Expo”, ikpo okwu pụrụ iche nke World Expo Protection Environmental, ka emepere ya na Shanghai National Convention and Exhibition Center. Ihe ngosi nke Dutch Amsterdam RAI ogbako mba uwa na ngosipụta ...
2020 Wenzhou Golden Eagle mgbapụta valvụ Exhi ...
Ihe Wenzhou nke 15 (Golden Eagle) Ngosiputa mgbapụta / valvụ Ngosiputa / mgbapụta mgbapụta Ngosiputa / International mgbapụta valvụ Ngosi / ụlọ ọrụ mgbapụta / onye na-emepụta ngwaahịa valvụ / ga-eme na Wenzhou Yongjia Oubei Culture and Sports Square site na October 23-25, 2020! 15th Wenzhou (Golden Eagle) mgbapụta v ...
N'ihi oke ike ya, nguzogide corrosion dị elu na ike dị elu dị elu, ejiri silicon carbide ceramik n'ọtụtụ ebe. E nwere tumadi akụkụ ndị a: silicon carbide ceramik nwere ezigbo kemịkal kemịkal, ike dị elu, ịdị ike dị elu, nguzogide abrasion dị mma, ...